KWIYUWU IJEWELRY ACCESSORIES MARKET - Yunis International Trading Co, Ltd.
KWI-YIWU XINGZHONG IMPAHLA YOKUFUNDA NGOBUCHULE
I-YIWU JINFUYUAN IJEWELRY PLAZA
ISIXEKO SORHWEBO SAMAZWE NGAMAZWE
I-Yiwu jewelry Izixhobo zeMarike zahlula phakathi kwintengiso yeXingzhong, Jinfuyuan Jewelle Plaza, kwiSixeko soRhwebo lwaMazwe ngaMazwe. Silandele ukuze sifunde ngale Ntengiso yeeJewelley zintathu kwi-yiwu.
Xa kuthelekiswa neJinfuyuan jewelry Plaza kunye ne-International Trade Ciry, abathengi bayazithanda ezi ntengiso zimbini ngaphezulu kweentengiso zeXingzhong kwintengiso yakudala yokungena kunye neemeko ezimbi. Kodwa isatsala abathengi abaninzi ukuba beze kuthenga izibonelelo zayo ezindala ezenza ukuba irente ibize kakhulu, ikhokelele kwixabiso eliphantsi kakhulu lemveliso.
IJinfuyuan Ubucwebe bePlaza yimakethi entsha xa kuthelekiswa nezinye iimarike ezi-2, yakhiwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo, iqala malunga neetafile ezingama-300, isikali sayo sincinci kuneSixeko soRhwebo se-Yiwu. Kodwa le marike lukhetho olufanelekileyo, kuba apha inkonzo ibalasele, ayixinekanga kangako okanye indala kangako njengemakethi yeXingzhong, nangona isikali sentengiso asinto inkulu kangako.
Izinto zentengiso zeJewellery zikumgangatho wesithathu weSixeko soRhwebo lwaMazwe ngaMazwe1, indawo ye-E. Nantsi eyona ntengiso inkulu yezinto zokuhombisa ubucwebe enee-booth ezingaphezu kwama-800, ithengisa zonke iintlobo ezahlukeneyo zempahla yorhwebo, abantu banokuphanda ezinye izinto ezifanayo xa bethenga iZinto zokuhombisa ubucwebe. Esi sesona sizathu sokuba umntu oshishino wasemzini amaninzi anje ngale ntengiso.